Kulan wariyaasha gobolka Mudug yeesheen oo looga hadlay hormarka gobolka, lagana soo saaray war-murtiyeed la xiriira xarigga Faysal M. Boston. – Radio Daljir
Kulan wariyaasha gobolka Mudug yeesheen oo looga hadlay hormarka gobolka, lagana soo saaray war-murtiyeed la xiriira xarigga Faysal M. Boston.
Luulyo 5, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, July 05 – Kulan ballaaran oo ay galabta iskugu yimaadeen wariyaasha ka shaqeeya warbaahinta ka hawl-gasha magaalada Galkacyo kana dhacay xarunta Radio Galkacyo ayaa looga hadlay midnimada iyo wadajir-ka warbaahinta gobolka, iyadoo war-murtiyeedna xiriira xarigga Faysal Maxamed Xasan Boston laga soo saaray.
Kulanka wariyaasha oo ay soo qaban-qaabiyeed guddi-saxaafadeed dhawaan loo xulay hirgalinta barnaamijyo si siman uga wada baxa war-baahinta magaalada Galkacyo oo ku saabsan Aayaha iyo hormarka magaalada ayaa u jeeddadiisa ugu weyni ahayd muujinta midnimada, wadajir-ka iyo wax wada qabsi ku aaddan hormarinta gobolka iyo kaalinta war-tabiyeyaashu ku leeyihiin.
Dood-dheer kaddib wariyaashu waxay isla garteen in lasii laban-laabo dadaallada wax-qabad ee ku aaddan Aayaha gobolka Mudug gaar ahaanna midka magaalada Galkacyo oo in muddo ah ay ka jirtay dhibaato amni xumo, waxaana la guddoonsaday in ahmiyad buuran la siiyo amniga iyo hormarka lagana dheeraado waxkasta oo qayb ka noqon karo dib-u-dhaca iyo hagar-daamada dadka iyo deegaanka.
Dhinaca kale wariyaashu gaba-gabadiina kulankooda waxay ka soo saareen war-murtiyeed la xiriira xarigga iyo xukunka wariye Faysal Maxamed Xasan oo dhawaan maxkamad ku taalla magaalada Bossaso ku xukuntay hal sano oo xarig ah kaddib markii lagu soo eedeeyey faafin warar wax bi’is ah sida dawladdu sheegtay, waxaan qodobada war-muriyeedku u qornaayeen sidaan.
1- Wariyaasha gobolka Mudug waxay si aad ah uga xun-yihiin xariga iyo kuxunka ku dhacay wariye Faysal Maxamed Xasan Boston.
2- Wariyaasha gobolka Mudug waxay dawladda ka dalbanayaan in la siidaayo wariyaha loona soo celiyo xorriyaddiisii.
3- Wariyaashu waxay dalbanayaan In la dhawro xaquuqadiisa shaqsi-ahaaneed iyo middiisa saxafinimaba.
4- Waa in la wada dhawro xiriirkii iyo wada-shaqayntii dawladda iyo war-baahinta oo dib loo milicsado is-fahankii iyo is-afgaradkii buuxay la iskula gaaray Garowe.
5- Ugu dambayntii wariyaashu waxay dawladda ka codsadeen in loo tix-galiyo dalabkooda ku aaddan siidaynta wariye Faysal Maxamed Xasan Boston iyo sidoo kalena dalabyo la mid ah ee maalmihii ugu dambeeyey ka imaanayey suxufiyiinta dalka iyo dibadda.
War-saxaafadeed: Daljir oo soo dhawaynaysa heshiis ay la gaadhay xafiiska arrimaha warfaafinta ee madaxtooyada Puntland.
Ururka Qurbajoogta Puntland oo shir ku yeesheen Toronto, Canada.